You are at:Home»NHAU DZEMUNO»Masvikiro akaungana kuHurungwe
“Kuchivanhu tinoita mapira asi vemachechi vanoita mapaseka. Mwedzi wa- Mbudzi hautwe mapira nekuti unoyera,” vanodaro.
Mashoko avo anotsinhirwa naMbuya Hellen Chidamahiya Mushonga vanova nyanzvi yemushonga yechivanhu vachiti zvirongwa zvakadai zvinobatsira varapi kuti vange vachitungamirirwa nemidzimu pakutsvaga mishonga yekurapisa. Mbuya Rosemary Ruzeya (69) vekwaSabhuku Butau, vanoti vanosvikirwa nemhondoro yechirume inonzi Nyazema uye vanoitawo mapira akadai gore roga-roga. “Ndinoitawo mapira akadai gore negore uye ndinobudirwa netateguru vangu mhondoro Nyazema avo vanondibatsira mukurapa vanhu. Vanondizivisa kana paine rushambwa kana chiedza nekundipa kundiso,” vanodaro.
Sekuru Chisanyu — semakore ose apo vanoita bira iri — vakabvutidzana ropa remombe raive mumbiya nemamwe masvikiro vakarinwa nekunanzwa mbiya kusvika yachena.
Mudzimai waVaGopo, Prisca Gopo, anoti mudzimu waSekuru Moyo unobuda bedzi kana vachinge varidzirwa mbira nehosho pachinzvimbo chengoma.